Ukuqala kukaRamallah usebenzisa ii-algorithms zokuxela kwangaphambili ukungqubana kweMideast
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IPalestine Breaking News » Ukuqala kukaRamallah usebenzisa ii-algorithms zokuxela kwangaphambili ukungqubana kweMideast
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • IPalestine Breaking News • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
I-RedCrow esekwe eRamallah ayinabhola yekristale. Kodwa kule minyaka mithathu idlulileyo ukuqala kwayo kuye kwangqina ukusebenza kwayo ngokuxela kwangaphambili ukungqubana ku-Mbindi Mpuma kusetyenziswa ubuchule bayo obunini. Idatha ibaluleke kakhulu kwiinkampani zecandelo labucala, iiarhente zikarhulumente kunye nabantu abanomdla wokucwangcisa imeko yezopolitiko engazinzanga, kwaye bahlale ngaphandle kwengozi.
Yasekwa ngo-Agasti ka-2014 ngoosomashishini basePalestine u-Hussein Nasser Elden no-Laila Akel, i-RedCrow yakhawulwa njengeqonga elikwi-intanethi elinika ixesha lokwenene lobukrelekrele malunga nemimandla eshushu yezopolitiko kuMbindi Mpuma. Ukuqala nge-West Bank, inkampani yabucala namhlanje ikwagubungela uphuhliso eJordani nase-Egypt. Abasebenzisi bokugqibela bafumana ulwazi lokhuseleko kwangoko kwiifowuni eziphathwayo, kusetyenziswa iRedCrow's usetyenziso. Idatha ibenza ukuba benze ukwahlula izigqibo zesibini, ngokusekwe kwimeko yokhuseleko kwangoko. Umzekelo, ngaba kukhuselekile ukuqhuba usiya kwenye indawo uye kwenye kwindlela ethile? Insiza yeRedCrow ibonelela ngemephu eneenkcukacha ebonisa indawo yezehlo zokhuseleko; ungquzulwano nematshi yezopolitiko. Insiza ide inike ingxelo ngeenkcukacha ezifana nomntu ophazamisekileyo engqondweni obonwa ebaleka endleleni.
"Iinkqubo zethu zakhiwe kwiseti yee-algorithms ukuqinisekisa ukuba ulwazi olunikezelweyo luchanekile," u-Elden, i-CEO eneminyaka engamashumi amathathu ananye ye-RedCrow, uxelele I-Media Line. Iialgorithms zibeka esweni kwaye ziqokelele ulwazi kunye neendaba ezivela kwimithombo evulekileyo, kubandakanya imithombo yeendaba zentlalo kunye nesishwankathelo esityebileyo sesiza (i-RSS) -ifomathi yokuhambisa umxholo wewebhu otshintsha rhoqo, uyachaza.
Ukuqokelela rhoqo idatha eluhlaza, inkqubo iguqula ngokuzenzekelayo iindaba kunye nolwazi kwiimephu ezihlaziywa rhoqo. Ngokufana ne-Waze eyaziwayo kakhulu, iRedCrow ibonisa indawo yezehlo ngasinye, kunye neenkcukacha-manani kunye nezilumkiso ezibhaliweyo, ezivumela abaqhubi ukuba baphambuke kwiingxaki ezinje ngokhuseleko lwezithuthi okanye isiminyaminya sezithuthi.
I-RedCrow inabathengi basekhaya nakwamanye amazwe kubandakanya i-Amideast, uKhathalelo kunye neHemaya.
Ngokuhamba kwexesha, ukuchaneka kolwazi olunikezelwa ngabaxumi bayo kuye kwacaca ngakumbi. Umzekelo, isicelo sibonisa ukuba mingaphi imithombo yolwazi eqinisekisileyo yonke into endiyithunyelweyo, ”u-Ziad Abu Zayyad, umthengi wangoku e-RedCrow uxelele I-Media Line. “Ndiyazi phantse kwangoko ngazo zonke izehlo ezenzeka eWest Bank naseGaza Strip. Inkonzo ibeka lonke ulwazi endaweni enye kuwe kunokuba mna ndiyikhangele. ”
Ngelixa imithombo yeendaba zentlalo igcwele ziindaba ezingezizo, iRedCrow iyicoca, ngokuxhomekeke kwimithombo ethembekileyo enje ngeakhawunti ezisemthethweni zikaFacebook okanye zeTwitter, kunye nabaphembeleli bezopolitiko abathembekileyo. Kwangokunjalo, inkampani inika ingxelo kuphela ngezinto eziye zabonwa ngabantu abaninzi ngaxeshanye kwindawo enye. “Ukongeza ekunikezeleni ulwazi ngokhuseleko kwangoko, iRedCrow ibonelela ngeemephu ezikhuselayo zexesha elide. Kwimimandla ethile, oko kunceda abanini bamashishini bathathe izigqibo ngobuchule, ”utshilo u-Elden.
Ngokwesiqhelo, ezi ngxelo zibandakanya iindaba ezingekaxelwa kwimo yezopolitiko, kunye novavanyo loluntu.
“Xa kusenzeka i-Arab Spring, bendiqinisekile ukuba kukho imfuneko yolwazi ngezokhuseleko. Sasifuna iqonga lokubonelela ngeenkcukacha zokhuseleko kunye neendaba, ”utshilo u-Elden. “Amajelo eendaba acalanye. Ibonisa kwaye ifihle amabali asekwe kwii-ajenda. ”
Imithombo yeendaba yeRedCrow yeMass Media idibanisa iindaba ezivela kumajelo eendaba kuzwelonke, engingqi nakwamanye amazwe. Phakathi kwamanqaku ewebhusayithi, iiarhente zeendaba kunye neebhlog ezihlala zibeka iliso kuzo yiHaaretz, Ma'an, Alray kunye noMkhosi woKhuselo wakwaSirayeli. "IMedia Media icoca iindaba kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye inikezela ngeendaba ezinxulumene nezokhuseleko kuphela ngokusekwe kwindawo yomsebenzisi wokugqibela" uLaila Akel, umseki-mbumbano weRedCrow uxelele iMedia Line.
Inkampani inerekhodi yokuphucula ubukho be "Palestine". Umzekelo, ngaphambili, amatshantliziyo atyhola uGoogle ngokususa "iPalestine" kwiiMephu zikaGoogle. Oko kubangele i #PalestineIsHere hashtag. Kodwa kuyabonakala ukuba, "iPalestine" ayizange iphawulwe kwasekuqaleni.
“Akuzange kubekho ilebheli 'yePalestine' kwiiMephu zikaGoogle. Nangona kunjalo sifumene i-bug esuse iilebheli ze 'West Bank' kunye 'neGaza Strip'. Sisebenza ngokukhawuleza ukubuyisela ezi ilebheli kule ndawo, ”utshilo isithethi sikaGoogle. Sebenzisa imephu zikaGoogle ezingqonge iWest Bank njengesiseko, iRedCrow yongeze amanqaku kunye neendawo ezibalulekileyo zokwenza imephu ekhuselekileyo nenolwazi.
Iqela leRedCrow, eliqale ngabathathu, likhule laba ngabasebenzi abali-13. "Isicwangciso sethu kukugubungela uMbindi Mpuma kule minyaka mibini izayo," utshilo u-Akel.
IRedCrow ifumene utyalomali kwiNgxowa-mali ye-Ibtikar - inkampani eyinkunzi efaka imali kutyalo-mali lwasePalestine.
"Ibtikar Fund ityale imali kwiRedCrow ngemveliso yayo enexabiso kwaye ifuneka kakhulu, kunye neqela elinamava," isithethi seNgxowa-mali ye-Ibtikar uxelele I-Media Line. "U-Ibtikar uzakuqhubeka nokusebenzisana neqela le-RedCrow njengoko liphuhlisa iimveliso kunye neenkonzo, kwaye lisanda ukugubungela lo mmandla."